အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မော်တော်ယာဉ်စားသုံးမှုကင်မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း,OEM အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း,မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > အကြီးစားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
အကြီးစားမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, မော်တော်ကားမှို၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့မော်တော်ကား shell ကို, ဘီးအချက်အချာ, ဘန်ပါနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ဖုံးအုပ်မှိုဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့မှိုများထုတ်လုပ်ကိုလည်းမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်နောက်ပိုင်းပရိသ၏တိကျသော size နဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသေချာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မော်တော်ယာဉ်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများစားသုံးမှုကင်မှိုကုန်ထုတ်ဒီဇိုင်နာများ၏ထုတ်ကုန်ပုံဆွဲသည်နှင့်အညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်, အဲဒီနောက်မှိုအင်ဂျင်နီယာဌာနကထုတ်လုပ်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်သည်အထိစမ်းသပ်ပြီးနောက်ကချိန်ညှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ကြီးမားသောနှင့်အသေးစားမှို, OEM မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်, ကြီးမားတဲ့မှိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်မောင်းသူမဲ့မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပိုကြီးတဲ့စက်တွေ၏စည်းဝေးပွဲကိုစိတျအပိုငျး, အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်, အိမ်သူအိမ်သားကရိယာအပါအဝင်စသည်တို့ကိုအသေးစားမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု, မှတ်စုစာအုပ်, ပါဝင်သည် ဝေဟင်မော်တော်ယာဉ်များ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အခြားတိကျစိတျအပိုငျးမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု။
Dongguan စီးတီး Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ "မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, အလင်းအရည်အသွေး, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး" ဟုပြောသည်။ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနဲ့အီလက်ထရောနစ် 3C ထုတ်ကုန် (ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်း, ဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေး) နှင့်စက်မှုစက်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင်ငါတို့သည် Semisolid Casting Die နှငျ့ပတျသကျသော, သတ္တုသေ-သတ္တုများပုံသွန်း, အလင်းအလွိုင်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရလဒ်တွေကိုအများကြီးအောင်မြင်ပါပြီ , ဆေးထိုးတန်ဆာ ချ. သေဆုံးသည်။ ပလပ်စတစ်မှိုနှင့်မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု။ အဆိုပါကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနမူနာထွက်သယ်ဆောင်ရန်, ထုတ်ကုန်သို့ကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုဒေသများနှစ်ခုကြီးမားတဲ့စက်ရုံတွေများအတွက် 101 rheological semisolid သေ-casting စက်တွေကသင်၏အတွေးအခေါ်များပြောင်းလဲ 100 ခန့်ကလူတစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသင်းရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ကြောင်း, နှစ် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်
တစ်ဦးကစက်ရုံ Qiaotou မြို့တွင်တည်ရှိသည်, Dongguan စီးတီး Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70000 စတုရန်းမီတာဧရိယာယူထားသော။ ဒါဟာ 800 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သားများရှိပြီး 150 စီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများနှင့် 101 တင်သွင်း Semi-အစိုင်အခဲသေ-casting မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသတ္တုများပုံသွန်းစက်စုစုပေါင်းရှိပါတယ်။ စက် 90 စုံနှင့်အတူ high-တိကျဆေးထိုးတန်ဆာ, ကတရုတ်အကြီးဆုံးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း Semi-အစိုင်အခဲသေ-casting လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး High-ထိရောက်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများ ချ. သေဆုံးသည်။
သတ်မှတ်ချက်များ (ပစ္စည်း, မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည်းခံစိတ်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်, etc) နှင့်သင်၏ 2D drawings သို့ပေး; သင့်ရဲ့ (MOQ နှင့်နှစ်စဉ်လိုအပ်ချက်) လိုအပ်အရေအတွက် and Logistic လိုအပ်ချက်ဖော်ပြထားခြင်း; 3D ရေးဆွဲနေတဲ့အပြည့်အဝထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့အများကြီးကြိုဆိုကြသည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုပိုအပိုင်းဒီဇိုင်း
မော်တော်ယာဉ်အလင်းရောင် bracket ကမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု
မူလစာမျက်နှာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ပူ Runner ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှို
စိတ်ကြိုက်အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အမြင့် Precision ပလတ်စတစ်မှို
Professional ကစိတ်ကြိုက်ပလတ်စတစ်မှို Injection ကိုမှို
မော်တော်ယာဉ်များအတွက် injection မှို
မော်တော်ယာဉ် Injection ကိုမှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း